साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ४, २०७४
नृत्य गर्न वा हेर्न कत्तिको रुचाउनुहुन्छ ? त्यसमा पनि ल्याटिन डान्स रुचाउनेहरूलाई आइतबार फोर्ट साल्सा स्टुडियोले बिशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । दरबारमार्गस्थित क्लब डेजाभुमा ल्याटिन डान्स कार्यक्रमको आयोजना हुँदैछ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, चैत्र ४, २०७४
करिब दुई वर्षपछि अभिषेक चलचित्र ‘मनमर्जियाँ’ मार्फत दर्शकमाझ आउने भएका छन् । उक्त चलचित्रको छायांकन प्रारम्भ भैसकेको छ । अभिषेक बच्चनले आफ्नो ट्वीटरमा आफु लामो समयपछि दर्शकमाझ आउन लागेकाले सबैको आशीर्वादको आवश्यकता पर्ने कुरा लेखेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, चैत्र ४, २०७४
अद्भुत र अचम्मको छ यो संसार । २० वर्षअघि युरोप, अमेरिकामा इन्टरनेटको प्रयोग हुँदै हुदैन भने पनि हुन्थ्यो । मानिसले प्रयोग गर्ने ऊर्जाको शून्य प्रतिशत पनि इन्टरनेटमा खर्च हुँदैनथ्यो । अब अहिले युरोप–अमेरिकाको चर्चा किन गर्नु ? बेथानी माइली घाँस–दाउरा खोज्न जाँदा चौबीसै घण्टा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर विभिन्न भाषाका लोकदोहोरी सुन्छे । डाटाको प्रयोग विधि पनि उसैलाई आउँछ । पुरा पढ्नुहोस्
अनोज रोक्का, चैत्र ४, २०७४
एलजी नाइटको यो १४औं संस्करणमा नेपाल आइडलका तीन बिजेता बुद्ध लामा, निशान भट्टराई, प्रताप दास, आइडलकै टप ९ प्रतिस्पर्धीमध्ये एक सन्ध्या जोशीले आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
ट्रान्सजेन्डर तथा ट्रान्सभेस्टाइट्सहरूमा केन्द्रित विश्वकै सर्वाधिक चर्चित र ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता कहलिएको मिस इन्टरनेसनल क्विन–२०१८ थाइल्यान्डमा सम्पन्न भएको छ । थाइल्यान्डको पटायामा सञ्चालन भएको उक्त प्रतियोगितामा विश्वभरिका २७ मुलुकका सहभागीहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पुरा पढ्नुहोस्
पहिला औंठी औंलामा लगाइन्थ्यो भने अहिले फेसनका पारखीहरूले औंलाको छालालाई छेडेर औंठी लगाउन थालेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
प्रतियोगितामा १ सय ४० किलोग्राम उचालेर सर्वाधिक बलियो खेलाडी बनेकी हाडा ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा ब्याचलर गरिरहेकी छिन् । उनी जिममा जान थालेको २ वर्ष मात्र भयो । उनले जिममा वर्क आउटका अतिरिक्त स्ट्रेन्थ बढ्ने एक्सरसाइज र किक बक्सिङको पनि अभ्यास गरिरहेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
क्याफेले एक पटकमा ३० देखि ४० जनालाई सेवा दिन सक्छ । एक महिनाअघि खुलेको यो क्याफेमा खाजा खान जाँदै हुनुहुन्छ भने खल्तीमा ३ सय रुपैयाँ भए पुग्छ । यो क्याफेको सजावट पनि आकर्षक छ । क्याफे पुराना काठबाट बनाइएको छ । तीनवटा कोठामा पलेंटी कसेरै खान सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
छैठौँ दक्षिण एसियाली व्यापारिहरुको सम्मेलनमा फेसन शो को आयोजना गरियो । दक्षिण एसियाका फेसन डिजाइनरहरुले डिजाइन गरेका ड्रेसहरुमा विभिन्न मोडलहरुले क्याटवाक गरेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्
राजाराम पौडेल, चैत्र ४, २०७४
हेर्दा अत्यन्त कठिन लाग्ने मुभमेन्ट साह्रै सहज तरिकाले प्रस्तुत गर्दा दर्शक मन्त्रमुग्ध भए । बिनाशब्दको प्रस्तुति भए पनि दर्शकले सहज तरिकाले बुझे । लेट्स इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुतिमा देखाइएको ५५ मिनेटको उक्त सर्कसलाई अर्जेन्टिनाको मान्द्रागोरा सर्को कम्पनीले तयार पारेको हो । पुरा पढ्नुहोस्